यो कुर्ची र कालो को’टले बोलाईरहेछ : तर श्याम सर कहिले नफर्किने गरी सधैका लागि अ’स्ताएर गए ! | समाचार
यो कुर्ची र कालो को’टले बोलाईरहेछ : तर श्याम सर कहिले नफर्किने गरी सधैका लागि अ’स्ताएर गए !
April 19, 2021 NepstokLeaveaComment on यो कुर्ची र कालो को’टले बोलाईरहेछ : तर श्याम सर कहिले नफर्किने गरी सधैका लागि अ’स्ताएर गए !
गुल्मी– जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको कोठा नम्बर ७ । प्रशासकीय अधिकृत श्याम न्यौपानेको कार्यकक्ष हो । बिहीबार बिहान कुर्सीमा झु’न्डि’एको कोटले न्यौपानेको प्रतीक्षा गरिरहेकोे थियो । तर, न्यौपानेले अब कहिल्यै कुर्सीमा बसेर कोट लगाउने छैनन् । कारण, उनी स’दाका लागि यो सं’सारबाट बि’दा भए ।
त्यो दृश्य नि’याल्ने कै’यनको आँ’खामा आँ’सु छ”च’ल्कि’ए । सोही कार्यकक्षमा नागरिकता लिनेहरूको दैनिक भी’ड हुन्थ्यो । क’लक’ला’उँदो उमेर र राष्ट्रसेवाले ओ’तप्रो’त भावना । न्यौपानेले सबै सेवाग्राहीको परिचय सोध्थे र सकेसम्म चाँडै सेवा दिन्थे । केही अ’प्ठ्या’रा कागजपत्र बोकेर आफैं सिडियोकहाँ पुग्थे र सहजीकरण गर्थे ।
अ’ल्पआ’युमै दै’वको आँखा पर्‍’यो । उनले सरकारी सेवामा देखेका सपना अ’धु’रा बने । अब उनी त्यो का’र्यक’क्षमा कहिल्यै फर्किने छैनन् । नि’र्जी’व कोटले न्यौपाने कुरिबसेको दृश्य साँच्चिकै हृ’द’यवि’दा’रक लाग्छ । अब त्यो कार्यकक्षको नेम प्लेटले प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने भित्र भनेर कहिल्यै देखाउने छैन । उनको अ’क’ल्प’नीय नि’ध’नले अ”र्धचे”त बनेका परिवारले प्युठानबाटै श”व बु”झे । श्रीमती पनि राष्ट्र सेवक रहेकी न्यौपानेको सानो बच्चा छ ।
उनी सं”यो’गले नयाँ वर्षमा श्रीमान्सँग प्युठानको स्व’र्गद्वा’री गइनन् । त्यही नयाँ वर्षले कहिल्यै सँगै नहुने बनायो । ईश्वर, सूर्य र यमलाल पनि राष्ट्रसेवक हुन् । आफ्नै जिल्लाको मुख्य अड्डामा काम गर्ने उनीहरू सबै काममा सहजीकरण गर्थे । इ’ष्टमि’त्र कमाएका थिए । ईश्वरकी छोरी ९ महिनाकी छन् । ईश्वरसँगै थुप्रै सपना साँचेकी जीवनसं’गि’नी अ”चे’त छन् ।
बुबाको मृ”त्युको पी’डा से’ला’उन नपाउँदै सूर्य आफैंले सं”सार त्या’गे । पतिसँगै छोरा गु’मा’एको पी’डा आमाले कसरी भु’ल्न सकून् । छोरी र नाति अस्पतालको श”य्यामा छन् । अब आमालाई जिन्दगीको के आ”श । यो परिवारलाई ‘जहाँ हो”चो त्यही घो”चो’ जस्तै भएको छ । सूर्य आकाशको सूर्यजस्तै रहेनन् । आज अ’स्ता’एर भोलि उ’दा’उने । यमलालको परिवार पनि वि’क्षि’प्त छ । जिल्ला प्रशासन ठूलो अ”ड्डा हो ।
नयाँ वर्षमा सार्वजनिक बिदा भएकाले बिहीबार स्वा’भाविक रूपमा सेवा’ग्रा’हीको भी’ड हु’न्थ्यो । दैनिक ला’इनमा सेवाग्रा’ही हुन्थे । कर्मचारीले नियमित सेवा दिन्थे । प्रशासनले प्रदान गर्ने नागरिकता र राहदानी शाखाका कर्मचारी सबै युवा र ऊर्जावान थिए । उनीहरूले मुस्कानसहितको सेवा दिन्थे । सेवाग्राही खुसी भएर घर फर्किन्थे । बिहानै तिनै कर्मचारी मृ”त बनेर कार्यालयको मू”ल गे’टमा ल”म्प”सा”र परेको दृ”श्यले कै”य’न गुल्मेली स्त”ब्ध बने ।
कार्यालय समय भएकाले कतिपय सेवाग्राही कामकै लागि प्रशासन आएका थिए । तर, उनीहरूले त्यो वि”जो’ग देखेर काम खो’जे’नन्, बरु काम ग’रि’दि’ने मान्छे खो’जे । ‘मलाई दु”र्घ”ट”नाको प’त्तो भएन । नागरिकता बनाउने काम भएर प्रशासन आएको हुँ । काम गर्नेहरू नै श”व बनेर ढ”लेको दे’खेँ । बो”ल्ने हि”म्मत आ’एन,’ सत्यवति गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का प्रेम रानाले भने, ‘मान्छेको ज्या”नै गयो । मेरो काम नभएर केही भएन ।’
प्रेम गाउँबाट फेरि फर्किन्छन्, काम बन्ने प”क्का छ । तर, दु’र्घ’ट’नामा नि’ध’न भएका प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेसहितका कर्मचारी फेरि फर्किने छैनन् । बुधबार प्रशासकीय अधिकृत श्यामसहितका १७ जना पूजाअर्चनाका लागि प्युठानको स्वर्गद्वारी हिँडेका थिए । बिहान साढे ११ बजे स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नम्बर २ रुमालेमा जिप दु’र्घ”टना पर्‍यो । दु’र्घ’ट’नामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय न्यौपानेसहित प्रशासन कार्यालयकै ४ र १ जना चालकले ज्या”न गुमाए ।
अरू सबै जिपमा सवारको काठमाडाैंसहितका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले दु’र्घ”टनामा मृ”त्यु भएका सबै व्यक्तिको श”व परिवारलाई बुझाएको छ । प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेको बुधबारै प्युठानमा पो”स्टमा”र्ट’म गरेर श”व परिवारलाई बुझाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । बिहीबार प्रशासन कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर ३५ वर्षीय सूर्यप्रसाद पन्थी, खरिदार ३५ वर्षीय ईश्वरी भण्डारी, २८ वर्षीय यमलाल पन्थी र सवारी चालक मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर ३ का २२ वर्षीय केशव कार्कीलाई संयुक्त रूपमा श्र”द्धा’ञ्ज’ली दिएर श”व परिवारलाई बुझाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनीहरू सबैको अन्तिम दा”ह सं”स्का’र गरिएको छ । दु’र्घ”टनाको कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको सेवा प्रभावित बनेको छ । सवारी दु”र्घ”ट’नामा प्रशासन कार्यालयको महत्त्वपूर्ण फाँ’टमा काम गर्ने ४ जना कर्मचारीले ज्या”न गु’मा’ए । केही घा’इ’ते भएका छन् । शो”कका कारण प्रशासन कार्यालयले २ वैशाखमा सबै सेवा ब’न्द गर्‍यो ।
३ देखि ६ वैशाखसम्म शा’न्ति–सु’र’क्षा र मु”द्दाबाहेकका सवै काम ब”न्द गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पन्थीले जानकारी दिए । प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी स’वा’र लु१ज १६५५ नम्बरको जिप स्र्वद्वारी हिँडेपछि बाटोमा धेरै पटक बि”ग्रि”यो । गाडी राम्रो परेन भन्ने हे”क्का सबैलाई नभएको हैन । तर, उनीहरूसँग गा”डी फे”र्ने अर्को वि’कल्प थिएन । ‘धेरै पटक गाडी बनाएर जाऔँ भनेर सबैले भन्यौँ, ड्राइभरले मा’ने’नन्,’ घा’इ’ते तारा भण्डारी बोहराले भनिन्, ‘रोकेनन् बरु गाडी ओ”भ”रट्या”ग गरे । त्यसैले दु”र्घ’ट”नामा परियो ।’ पालिका खबरका लागि पत्रकार टोपलाल अर्यालले यो समाचार लेख्नुभएको छ ।
बैशाखभरी देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
मलेसियामा गाडी दुर्घ टना हुँदा एकजना नेपाली सुरक्षागार्डको मृ त्यु, अन्य घा इते ।
June 3, 2021 Nepstok
नेपालगन्जमा ३ दिनमा ३ भाइको निधन, घटना सुनेर दिदीको पनि मृत्यु
May 20, 2021 May 20, 2021 Nepstok
बाँकेका अस्पतालवाट आयो शुभ समाचार
May 30, 2021 Nepstok